डा. केसी पक्षले विधेयक फिर्ताको अडान छोडेपछी फेरी वार्ता शुरु
सरकार र आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच संवाद पुनः सुरु भएको छ । डा. केसीको वार्ता टोलीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्वशर्त छाडेपछि सरकारी टोलीसँग संवाद सुरु भएको हो । यसका लागि नेकपाका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले पहल गरेका थिए । उनले केदारभक्त माथेमा र मेडिकल काउन्सिलका धर्मकान्त बास्कोटासँग छलफल गरेका थिए ।
लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग छलफल गरे । नेम्वाङले डा. केसीको वार्ता टोलीसँग पनि सम्वाद गरे । सिंहदरबारमा भएको छलफलमा डा. केसीको वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा केके संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लिखित नै दिएको छ । स्रोतका अनुसार १० वर्षे प्रतिबन्ध, ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने लगायतका बुँदा छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा डा. केसीको तर्फबाट जीवन क्षेत्री, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल, अभिषेकराज सिंह र सुमित पाण्डे गएका छन् ।
सरकारले यसअघि नै डा. केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । सरकारी वार्ता टोलीलाई विधेयकका विषयबस्तुमा छलफल गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यसअघि केसीले कर्मचारीसँग वार्ता गर्दै नगर्ने अडान लिएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितको उपस्थितमा प्रधानमन्त्री निवास बालुटावारमा केसीको अनशनबारे छलफल भएको थियो । त्यस छलफलले केसीको मागलाई निकास दिन सकारात्मक पहल थाल्ने निचोड निकालेको थियो ।
Posted on July 24, 2018 Author Categories जनस्वास्थ्य सरोकार, प्रमुख समाचार, फोटो स्लाइडर, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, राष्ट्रिय Group, स्थानीय, स्वास्थ्य
Previous Previous post: कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले रुँदै पदबाट राजीनामा दिए (हेर्नुस भिडियो)
Next Next post: आफ्नै विद्यार्थीको गुप्ताङ्ग सुम्सुमाउने प्रअलाई गाउँलेले जुत्ताको माला र कालोमोसो लगाई गाउँ डुलाए